अघिल्ला वर्षहरूमा जति पनि आस देखिएन3Ghumti
अन्तर्वार्ता | 2020-02-03 13:54:00 |
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीसँग गरिएको कुराकानि
बजेटको छमहिने अवधि पार भएको छ । कस्तो रह्यो यो यात्रा ?
हामीले अपेक्षा गरेअनुसार ८ प्रतिशको आर्थिक वृद्धिका लागि विकास खर्च हुनुपर्ने थियो त्यो भएन । निजी क्षेत्रबाट पनि लगानी हुन सकेन । लक्ष्य भनेको सरकारले पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना ल्याउँदा यो चालु आवसम्मका ९४ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य थियो ।
सरदर त्यसो गर्दा १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र चालु आवमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य थियो । ९३ अर्ब खर्च गर्नका लागि पहिलो वर्षमा पनि त्यहीअनुसार खर्च हुनुपथ्र्यो । निजी क्षेत्रले पनि त्यहीअनुसार हुनुपर्ने थियो ।
६ महिनाको तथ्यांकले के भन्छ ?
३५ प्रतिशत खर्च भएको छ । राजस्व ३५ प्रतिशत नै उठेको छ । एकै दिन ४२ अर्ब राजस्व उठेको सरकारले दाबी गरेर छमहिने बिट मार्दा पनि वर्षभरमा उठ्नुपर्ने शतप्रतिशतमध्ये ३८ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठ्ने देखिन्छ । विगत वर्षको हेर्दा पनि राजस्वको उठ्ती गर्त वर्ष पनि ४२ प्रतिशत थियो ।
पाँच वर्षअघि पनि ४६ प्रतिशत छ महिनामा उठ्ने गरेको थियो । पछिल्ला दिन त राजस्व नै कमी आएको छ । अहिले त तीन तहको सरकार छन् । केन्द्र सरकार बलियो होला भनेको त्यो पनि भएन । गत वर्ष खर्च पनि १७ प्रतिशत खर्च भएको थियो । अहिले त पुँजीगत खर्च नै सन्तोषजनक देखिएको छैन ।
मध्यावधिको समीक्षामा खर्च र राजस्व दुवै लक्ष्य पूरा नभएर निराशा दिएको हो ?
योपटक आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा कम भएको देखिन्छ । खर्च कम भएर राजस्व कम उठेको हो । आर्थिक वृद्धिदर पनि यस्तै हो । यसपटक १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको हो । खर्चअनुसार नै राजस्व प्राप्त हुने हो ।
सरकारले पुँजीगत खर्च एक रुपैयाँ गर्दा निजी क्षेत्रले ३ रुपैयाँ खर्च गर्छ । जसबाट औद्योगिक क्षेत्र प्रभावकारी हुन्छ । उत्पादन बढ्छ । राजस्व पनि बढ्छ ।
सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेको थियो । यो नाराले हावा खाएको हो ?
यो समृद्धिवाला नारा सरकारको हो र हामीले चाहेको पनि त्यही हो । देश समृद्ध होस्, हामी पनि सुखी बनौं भन्ने कुरा हो । मूलतः संविधान बनायौं । शासकीय प्रणाली फेरिए । अधिकार पनि तल्लो तहमा पुगे । संघीय मुलुकहरूमा तल्लो तहलाई धेरै अधिकार दिने नेपाल हो । हाम्रो कार्यशैली संयन्त्र प्रणाली, व्यवहार र सोचचाहिँ पुरानै राखेका छौं ।
पछिल्ला दिनमा मैले दुईजना सरकारका प्रमुख व्यक्तिले सुनेँ कि ईश्वर पोख्रेलले हामी समृद्धि ल्याउँछौं भनेका थियौं तर कार्यशैलीमा परिवर्तन नगर्दा केही गर्न सकेनौं भन्नुभयो । यसबाट पनि उहाँहरूलाई यस्तो अनुभूति भएको छ ।
यो संघीयतासँगै, त्योअघि नै हामीले तयारीहरू गरेका थिएनौं । रणनीतिक योजना, कार्ययोजना, संरचना, कानुनहरू, कार्यविधिहरू बनाउनुपर्ने थियो । हामीले गरेनौं । ७४ सालमा संविधानअनुसार संरचना फेरियो, सोच फेरिएन ।
संघीयताका लागि हामी तयार थिएनौं हैन ?
त्यसका सारभूत, अवयव, अन्तर्वस्तु केलाएर हामी जानुपर्ने थियो अगाडि । त्यस्तो भएन । तीन प्रकारका व्यवहार चाहिन्छ । जनशक्ति, कानुन, नीति चाहिन्छ भन्ने हेक्का कम भयो ।
त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी संघीयतामा जान्छौं भन्ने कुरा अनुभूति भएन । उच्च अधिकारीहरू तल अधिकार दिन नचाहने भए । संघीयताको मर्म नबुझ्नेहरू पनि भए । मितव्ययी ढंगले कुरा पनि भएन ।
सरकारले हामीले काम गरेका छौं तर हामीले गरेको कामको प्रचार भएन भन्छन् ?
सरकारको नियतमाथि के शंका गर्नु ? जनताले परिणाम हेर्छ । जनताले राम्रो गर्दा त नेपालका प्रचार आफैं गर्छन् । १०० वटा गल्ती बिर्सिन्छन् । जनताले अनूभूति गर्ने गरी काम हुन नसकेकै हो । स्थानीय तहलाई अधिकार त दियौं तर काम भएन । नीति, योजना, छनोट, खर्च, जनशक्ति अभिवृद्धिमा कति काम ग¥यौ त ?
त्यसलाई सिको गर्नुभन्दा आफ्नो आफ्नो हितमा लागेको देखियो । अख्तियारले त अहिले स्थानीय तहमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको देखायो । तथ्यहरू देखाएर भन्यो । योजना छनोटदेखि उपभोक्ता समिति गठनमा पनि त्यस्तै भयो । साधनको दुरुपयोग भयो भन्ने कुरा पनि गरेको छ । ६१ बुँदे सुझाव दिएको छ ।
संघीयता देशले धान्न सकेन हो ?
यो त एक औजार हो । शासन पद्धति हो । अधिकारको विकेन्द्रीकरण हो । यो आणविक भट्टी हो । यसबाट उत्पादन भएको ऊर्जा वितरण गर्न जान्नुपर्छ । समुचित प्रयोग हुन सकेन भने धान्न नसकिने गरी अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुन्छ । आणविक ऊर्जा केन्द्रले दुर्घटना निम्त्याउन पनि सक्छ । त्यस्तो अवस्था आउँदा कति ठूलो भयावह स्थिति होला भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
सरकारले लगानी सम्मेलन ग¥यो त ? किन लगानीकर्ता आएनन् ?
लगानी गर्नका लागि सम्भाव्यता पर्याप्त छ भन्ने देखेका छन् । आशा पनि देखाएका छन् । अग्रसर पनि भएका छन् । ६५ सालदेखि ७६ सम्म आउँदा अहिले लगानी भित्र्याउने सम्भावना, उद्योग विभाग, लगानी बोर्ड दुई यस्ता कुरा हेर्छन् । बोर्डले ६ अर्बभन्दा माथिका योजना हेर्छन् ।
१६ मा भएको लगानी सम्मेलनमा १४ खर्बको प्रतिबद्धता आयो । पछिल्लोमा पनि लगानी प्रतिबद्धता नराम्रो थिएन । बोर्ड स्थापना भएपछि ६ खर्ब जतिको प्रतिबद्धता आएको छ । झन्डै ३ सय अर्बको प्रतिबद्धता आएको छ । भित्रिएको चाहिँ २ सय अर्ब पनि छैन ।
लगानी सम्मेलनबाट प्रतिबद्धता जनाएका विषयमा पनि सरकारले अवरोध गरेको कुरा भयो नि ?
हामीसँग ५ लाख राख्न पनि सम्बन्धित संस्थाको साख हेरिन्छ । सेयर किन्दा पनि त्यसै गर्छौं । खल्तीमा भएको जम्मा भएको रकमलाई पनि त्यसैगरी लगानी गर्न खोज्ने हो । बढाउनका लागि नै लगानी गर्ने हो । १० वर्षमा लगानी गर्दा के फाइदा हुन्छ भन्ने हेरेर मात्रै गर्छन् ।
अहिले पनि लगानीकर्ताले हामीलाई पत्याएका छैनन् हो ?
सुधार भएको छ । विभिन्न ऐनहरूमा संशोधन भइसकेको छ । नीति र कानुन संशोधन भएको छ तर कार्यान्वयन गर्ने निकायमा सुधार भएको छैन । पूर्वाधारमा पनि सुधार भएको छैन । झन्झटिलो प्रक्रियाले पनि योजना बन्दी बनेर बसेका छन् ।
लगानी गर्नेले पनि ऐनले तोकेको समयमा पनि काम हुँदैन । लगानी पेन्डिङमा हुँदाको ब्याज लगानीकर्ताले हिसाब गर्छ । महिना दिनमा हुने कामलाई ५ महिनासम्म झुलाउँदा पनि त्यो कर्मचारी दोषीको भागीदार हुँदैन । बार्गेनिङ गरिरहेको छ ।
राज्यले नै यस्तो गर्छ है ?
संस्थागत त होइन । तर, सरकार र संयन्त्रमा भएका व्यक्तिहरूले यस्तो गर्छन् । राजनीति गर्नेहरू, कर्मचारीहरू, राजनीतिक दलका सुन्डमसुन्ड पनि पर्छन् । तीन तहको सरकार छ । लगानीकर्ताले योजनामा लगानी गर्छन् ।
लगानीका लागि व्यावहारिक नीति भएन हैन ?
यस्ता नीतिहरूमा केही अस्पष्टता छ । तर, मूल रूपमा कार्यान्वयनमा नै मुख्य समस्या छ ।
छ महिनाको तथ्य हेर्दा हामीले यो सरकारलाई कहाँ पाउँछौं ?
यो सरकारमा बसेका मानिसका सोचमा परिवर्तन भयो भने अवस्था सुध्रिन्छ । १५ औं योजनामा यो सरकारबाट निराश भइहाल्नुपर्ने होइन ।
किनभने अझै पनि अढाई वर्ष बाँकी छ । कतिपय नीतिहरू पनि स्पष्ट छैनन् । राजस्व नीति पनि गतिलो छैन । उत्पादन बढोत्तरी गर्ने राजस्व नीति छैन । २०३० सम्ममा मध्यम आयको देश बन्न गाह्रो छ ।